Ireo no Musings eo an-toerana tsara indrindra hatramin'izay aho sakafo nahafinaritra, nandritra ny hijanona ao Aotrisy. Izaho dia tao amin'ny fahavaratra 2016 fa ny 4 volana internship amin'ny kely-salantsalany ONG eo an-toerana. Ny traikefa internship Tena lehibe, fa nahazo ny hihaona olona manan-talenta tanora, izay mifandray amin hatramin'izao, ary efa afaka ho fampiharana ny fahaiza-manao nampianarina tao ny fahafahako amin'ny anjara asany eo amin'ny Singapore amin'izao fotoana izao.
Azo iadian-kevitra ny niandohan'ireto lovia ireto - ny sasany milaza fa avy any amin'ny faritra swabian ity, ary ny sasany hafa milaza fa ny firaketana an-tsoratra tranainy indrindra mitondra ny datin 'ny Kasespatzle indray ny tanana-tsoratra Cookbook tany am-piandohan'ny taonjato faha-17. Ny anarana mety ho avy amin'ny hetsika vilia fanaova doughs ho manaikitra-salantsalany ampahany, nefa tsy misy porofo ara-tantara izany. Amin'ny andro ankehitriny, lovia io dia fantatra ho ny ampahany amin ' fampiononana sakafo taorian'ny ela fitsangantsanganana ao amin'ny miavaka Alpine rivotra. Raha tsy izany, dia afaka hahitanareo azy any an-toerana ny ankamaroan'ny trano fisakafoanana. Nanompo tamin'ny faritra maro miteny alemà firenena, ny Vorarlberg Kasespatzle (Vorarlberg ao amin'ny Andrefan'i Aotrisy) Tena malaza any Aotrisy. Dia ny paty vita amin'ny lafarinina tsara toto, araka ny voalaza ao amin'ny anarana niaviany, vita ho kely ny kaikitry ny nilentika in Nadininy fromazy. Ny mihasimba any an-danitra tokoa, mitsonika eo am-bavan'ny. Voaendy tongolobe, ary tongolo lohataona hametraka zava-manitra ho any an-danitra lovia creamy ity (izy ireo raha ny marina hanao asa lehibe!).
Ento mody indray aho mba Aotrisy - nihiaka foana aho isaky ny mahita izany ao amin'ny Fanjakana Candy baovao (Singapore ny mpitarika iray mpanafatra confectioneries iraisam-pirenena, Io irery no toerana afaka mividy vokatra Fomba). Fomba nentim-paharazana dia Aotrisy raharaha fananganana fianakaviana izay naorina tamin'ny faramparan'ny taonjato faha-19. Mitam-piadiana miaraka amin'ny fanaraha-maso hentitra kalitao, voafantina tsara sy malaza sakafo miloko entana, marika io dia malaza noho ny maha-sonia fahatsiarovana any Aotrisy. Mannerschnitten (ny fonosana ny sôkôla hazelnut ny mofo misy) dia tsy maintsy andramana; tsy dia mamy na dia matsatso, Toa tsy izany tsy hampiaiky volana ny mamy nify. Ny hazelnut mpitondra ahy foana niverina ny andro mamirapiratra ao Vienna. Amin'izao fotoana izao dia manandrana foana wafers sôkôla fanao amin'ny fotoana fohy aho na isaky ny maniry izany aho. Efa nieritreritra toy izao tsy ampy amin'ny amin'ny toeram-pivarotana ao Eoropa Afovoany ihany. Na izany aza, Mazava ho azy fa diso aho araka ny Mannar zava-mamy misy in Singapore koa.
Schlutzkrapfen (paty antsasaky ny volana feno feno fromazy sy epinara)
Nifanena tamin'ity lovia ity aho rehefa nitety an'i Innsbruck tany Andrefana Andrefana izay fanta-daza amin'izany mari-toerana, ny Golden Roof. Haingana nankatỳ aho tao amin'ny fisotroana kafe, ary nitady zavatra zavamaniry. Ny famakiana ny sakafo, ny paty miaraka amin'ny legioma dia nahafeno Toa tsara ho ahy, noho izany dia baiko izany. Nieritreritra aho ny ela paty miaraka amin'ny legioma voatetika, nefa Hay dia nisy namongotra paty amin'ny zavatra ao anatiny izy ka voavoatra ny trano amin'ny hafafiny fromazy ary tongolo voatetika lohataona. Ny dibera levona ireny niasa iray taonina hanao izany lovia malama am-bavako. More zava-dehibe, Mbola tsaroako ny mpandroso sakafo ho avy ny latabatro ary manontany raha tsara. Nolazaiko taminy nisy izany matsiro - aho dia nanohina ny foko ny fiahiana momba ny mpanjifa afa-po sy ny foko dia feno hafanana. Avy hatrany amin'ny tany atsimo Tirol (lasa anisan'ny Italia), fa prevalently sakafo iraisana eo amin'ny manodidina ihany koa Tirol. Nisy asa be dia be ny anjara hanao izany na dia eo aza ny zava-misy fa toa ka mora ny manao.
Iray amin'ireo "tsy maintsy mihinana" any Wina, Aotrisy. Izy io dia tena an-toerana noforonina manokana any amin'ny faran'ny vanim-potoana ny Habsburg. Fantatrao ve fa nisy ady tsy mitombina fa manan-danja ao ambadiky io mofomamy? Viennese mofomamy roa goavam-be, Demel ary Sacher efa tao amin'ny "mamy" ady fanjakana nandritra ny fotoana ela fa na dia nitarika ho amin'ny fitsarana mampihomehy raharaha; izay milaza ny tenany ho tokony ho "tany am-boalohany Sachertorte"? Ohatrinona apricot tokony hampiasaina mba hahatanteraka ny mofomamy? Inona no mety ho mari-pana rano sôkôla? Tena matotra, efa niady hevitra rehetra ao amin'ny fanjakana izany kianja, tsy amin'ny fandrahoan-tsakafo kilasy na amin'ny karazana. Amin'ny farany, Sacher nandresy tamin'ny ady ary ankehitriny prides ny tenany amin'ny hoe "iray Sacher torte am-boalohany." Ankoatra ny tantara, Izaho manokana dia nisafidy ny Demel iray tahaka ny mamy sy malefaka kokoa noho ny an'i Sacher. Inona no maha samy hafa ny Sacher "Sacher torte" sy ny Demel mifanitsy? Nahazo teo aloha kely ambony Pricing sy ny maro hafa sosona mofo sy mihamaro apricot ao anatin'ny mofomamy. Ny farany dia mora kely ary ny maro creamier.
Ny solontenan'ny Vienne ny cosmopolitanism. In Vienne, misy entana ny tsena mpivarotra "vahiny" 'sakafo avy any saika manerana izao tontolo izao. Afaka mahita nahandro sy akora ilaina ianao avy any Russia, vorontsiloza, Japana, India, sy ny maro hafa. Tany am-boalohany avy any Afovoany Atsinanana, izany no iray amin'ireo safidy Viennese rantsan-tsakafo hita ao amin'ny tsena iraisam-pirenena. Vita amin'ny nopotsehina voanjobory asiana, ny Falafel baolina azo hanina amin'ny endriky ny Falafel Fonosiny na arahina amin'ny flattening mofo. Na izany na tsia, Falafel dia tonga noho ny bunch ny voapaika legioma sy ny yogurts manontolo ao anatin'ny OAny am-Wrap na mofo Pita. Maha-tonga lafatra Vegan Foto-tsakafon'ny, izao no lovia namako ampiasaina mba hanolotra ahy raha fantatro fa voafetra ihany no safidy ho toy ny sakafo vezetarianina. Misy Falafel pahitra taonina nanerana Vienne, fa ny toerana tena Falafel mijanona dia ny iray tany Brunnenmarkt. Fantatra ho toy ny adala tsena mora afaka mahazo izay rehetra nahay ny midadasika kokoa ny sakafo amin'ny vidiny ambany mampino, tsena ity dia manolotra ny ampahany amin 'Falafel Wrap izay ihany koa ny vidin'ny latsaky ny USD 1 eo ho, manao azy io angamba no mora indrindra ao an-tanàna. Tsy ilaina intsony ny milaza, ny tsiro amin'ny fonosana dia tsara toy ny an'ny tsena Viennese hafa.
Ny toerana tena Aotrisiana tsindrin-tsakafo! Ny mofomamy buttery sy ny paoma vitsivitsy ary ny voaloboka maina dia miasa majika ary mahatonga ahy hahatsapa ho any an-danitra. Ny angano dia manana izany fa Aotrisy-dehibe ny mamy baklava tsindrin-tsakafo avy any Afovoany Atsinanana. Baklava na ny fanaka malefaka mofomamy sy ny siramamy ary ny syrup, Izany dia midika hoe hilentika midika mofomamy ao amin'ny syrup. Ny hoe amin'ny lafiny Tsirom kokoa, Apfelstrudel dia ny voafaritra dikan-Baklava- izao no ohatra tsara ny Aotrisiana sakafo, toy ny maro amin'izy ireo dia afaka manara-maso ny soritry avy teo aloha fanjakana Aotrisy faritra izay efa dehibe. Misy fomba fanamboarana Apfelstrudel maro be an-tserasera, ary ny sasany avy Ny Fomba Ahitana ny mpanoratra dia malala-tanana ampy hizara ny family fomba fahandro miaraka amin'izao tontolo izao. Na izany aza, ny fitsipika rehetra izao dia ny koba ka tokony ho manify ny mofomamy Chef afaka mamaky ny gazety amin'ny alalan'ny izany.